Myat Shu - 2011 May
You are here : Myat Shu » Archives for May 2011
Published By Myat Shu On Sunday, May 29th 2011. Under သူတို့အာဘော်
ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်၊ အတွဲ ၁၊ အမှတ် ၄၄ (မေလ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်) ထုတ် ဂျာနယ်မှ အထက်ပါ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမြင်ကို စုစည်းတင်ပြထားသည့် ကဏ္ဍမှ ကောက်နှုတ် ထားပါသည်။ မျက်ရှု စာစုအဖွဲ့ (၁) “ ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်း ပြင်လို့မရဘူး” ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ခင် ပညာရေးစနစ်ဆိုတာ တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ဘ၀မှာ နေထိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒီပညာရေးစနစ်က ထွက်သွားတဲ့သူဟာ ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့လာတာတွေကို ရင်ဆိုင်တတ်ပြီး အလုပ်ကိုလည်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိဖို့ ကောင်းတယ်။ အခုတော့ ဒီပညာရေးက ဒီလို ... Continue Reading
ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည် … ဖူးတံဝင့်လို့ချီ
Published By Myat Shu On Thursday, May 26th 2011. Under ဆောင်းပါး
မကြာမီ မေလ ကုန်ဆုံးတော့မည်။ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သည့် နွေအပူချိန် တရွေ့ရွေ့ ဆုတ်ခွာသွားသည့်နည်းတူ မိုးသက်တင်လေကိုလည်း စတင်ခံစားနေရပြီ။ မိုးဦးကျ ဇွန်လတွင် သစ်ပင်ပန်းမန်တို့ မိုးစက်ရေဖြင့် အသက်ဆက်ကြရသကဲ့သို့ အနာဂတ်၏ သားကောင်းရတနာများသည်လည်း ပညာရည်နို့ သောက်စို့ရန် လောကဓာတ်ကျောင်းများသို့ ခြေလှမ်းကြရသော အခါသမယဖြစ်ပါသည်။ မှတ်မိသေးတော့သည်။ ကလေးတုန်းကပေါ့။ သည်လို ကျောင်းဖွင့်ရန် တပတ်လောက်လိုသည့် အချိန်ရောက်ပြီဆိုလျှင် ကျောင်းအပ်ရ၊ စာအုပ်၊ ခဲတံ၊ ခဲဖျက်၊ ပေတံ ၀ယ်ရ၊ လွယ်အိတ်အသစ်၊ ကျောင်းဝတ်စုံအသစ် ပူဆာရနှင့်။ အမေနှင့်အတူ ကျွန်မတို့ ညီအမနှစ်ယောက် ကျောင်းအပ်ရာမှ ပြန်လာတိုင်း၊ ကျောင်းအပ်ခနှင့် မင်းကြီး၊ မင်းလေးနှင့် မမနှဲတို့ကို ပူဇော်ပသရသလို အာစရိယဂုဏော အနန္တောအတွက် ပေးကမ်းရက်ရော ကန်တော့ပန်းဆင်ခဲ့ရသည်များကို အမေက ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, May 25th 2011. Under ၀တ္ထု
ခွေးတို့၏ လောကကြီးတွင် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အချစ်နာလန်ထသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်၏။ တော်သလင်းလကျမှဖြင့် ခွေးအပေါင်းတို့ကို ရာဂနတ်မင်းကြီးသည် ဖမ်းစားလေတော့သတည်း။ အာမိတ်၊လွေဇောနှင့် ခွေးနက်ကြီးတို့မှာ သိကြားမင်း၏ သားသမီး မဟုတ်ကြသောကြောင့် သူတို့လည်း ရာဂနတ်မင်းကြီး၏ ဖမ်းစားခြင်းကို ခံကြရရှာလေသည်။ ရာဂနတ်မင်းကြီး၏ လက်ဦးဆုံး ဖမ်းစားခြင်းခံရသူကား လွေဇော နှင့် ခွေးနက်ကြီး ဖြစ်ကြလေသည်။ လွေဇောနှင့် ခွေးနက်ကြီးတို့မှာ နဂိုကပင် တစ်ကောင်နှင့် တစ်ကောင် ရင်းနှီးရသည့်အထဲတွင် ရာဂနတ်မင်းကြီးက ဖမ်းစားလိုက်ပြန်သောအခါ အထူးပင် မူးမူးရူးရူးဖြစ်၍ သွားကြကုန်၏။ လွေဇောနှင့် ကြာသမား ခွေးနက်ကြီးတို့မှာ သွားလည်းတူတူ နေမူမကွာ လွန်စွာမှပင် ပျော်ပါးနေကြကုန်၏။ စားရမှန်းလည်းမသိ၊ သောက်ရမှန်းလည်း မသိ။ တစ်ကောင်ကို တစ်ကောင် ပလူးနေရ၊ နှူးနေရလျက် ကျေနပ်ကြလေပြီ။ ... Continue Reading
ဝက်ဝက်ကွဲ အမတ်ကြီး ဆူးခက်
Published By Myat Shu On Wednesday, May 25th 2011. Under ကဗျာ
ဆူးခက်လို ပက်ပက်စက်စက် မလုပ်ရဲလို့ ကိုယ်အထုပ်ကို ကိုယ်ဆွဲ ကိုယ်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ဘေးမဲ့တွေထဲ ကိုယ်လည်း အပြေးအလွှား ရောလိုက်ခဲ့တယ်။ မနက်က သတင်းစာမှာ အိုစမာဘင်လာဒင် သေကြောင်းပါလာတယ်။ ပြောင်စပ်စပ် ခပ်တည်တည်ကောင်တွေ ပါလာတယ်။ ပြီးတော့ အိုင်အမ်အက်ဖ်က လူကြီးလူကောင်း လမ်းကြောင်းမှားတဲ့အကြောင်း ပါလာတယ်။ လာဘ်စားမှုကို မဝသေးလို့ မတိုက်ဖျက်နိုင်သေးကြောင်း ပါလာတယ်။ ဒါနဲ့မေးပါရစေဦး... တပတ်တခါ မီဒီယာမှာတွေ့ပြီး လက်ဖက်သုပ် ကျွေးမှာလား။ တံတွေးနဲ့ထွေးမှာလား။ ငါယုံတယ်.. မင်းရထားတက်စီး ပြယုံနဲ့တော့ ငါတို့ တိုးစီးနေရတဲ့ လိုင်းကားတွေ ချောင်မလာပါဘူးကွာ..။ မင်းတို့အလုပ်သင့်ဆုံးအလုပ်က ညညအချိန်မတော် မင်းတို့ ထင်ထင်ရှားရှား သွားလာအော်ဟစ် မူးယစ်တတ်တဲ့ ကာရာအိုခေ၊ မာဆတ်နဲ့ ဘီယာဆိုင် ဝက်ဝက်ကွဲတွေထဲက မင်းတို့ပေါင်ပွတ်၊ ခေါင်းပွတ်ခဲ့တဲ့ မင်းတို့သမီးအရွယ်လေးတွေကိုသာ မုန့်ဖိုးဖိုးများများပေးခဲ့စမ်းပါ အမတ်ကြီးဆူးခက်ရယ်။ သီဟငယ် ၂၅. ၅. ၂၀၁၁ ... Continue Reading
ချမ်းချမ်းနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီလို့ ပြောတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
Published By Myat Shu On Tuesday, May 24th 2011. Under အနုပညာသတင်း
အဆိုတော်ချမ်းချမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုတ်တရက် လက်ထပ်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းစကားနဲ့အတူ သတင်းစကားအချို့ မေးမြန်းပြောဆိုမှုများ ကြားသိရသည့်အတွက် ကာယကံရှင်များထံသို့ ဆက်သွယ်ရာမှာ ချမ်းချမ်း သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ မေ ၁၇ ရက်နေ့က သုံးပတ်ကြာ ဂီတဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ် ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရပါတယ်။ လတ်တလောသတင်း စကားများအတွက် ချမ်းချမ်း၏ချစ်သူ မော်ဒယ်ဘုဏ်းသိုက်နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ x x x လတ်တလော ဘာအနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေရှိပါသလဲ။ ကျွန်တော် မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်တွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ချောင်းသာမှာ idiots ရဲ့ လူအဂီတထဲက “မင်းနဲ့နီးဖို့” ဆိုတဲ့ ဗီစီဒီရိုက်ပြီး ပြန်လာတာပါ။ ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ရိုက်ကူးပေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဗီစီဒီကိုလည်း တည်းဖြတ်တာတွေ လုပ်ပေးနေဖြစ်ပါတယ်။ ခုတလောသတင်းတွေ ကြားနေရတယ်။ ဘုဏ်းသိုက်နှင့် ချမ်းချမ်းကလည်း တရားဝင် ချစ်သူတွေအဖြစ် ပရိသတ်ကို ... Continue Reading
အထာမပျက်စေချင်ပါ မိုးကုတ် ထာပွဲဈေး
Published By Myat Shu On Tuesday, May 24th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
မိုးကုတ်မြို့ဟာ ဒယ်အိုးကလေး တစ်လုံးလို တောင်တွေ ၀န်းရံထားတဲ့ အခွက်မြို့ကလေးပါ။ ဒီမြို့ခွက်ကို တောင်တွေပေါ်ကနေ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြတော့ စေတီတွေ၊ ဘုရားတွေ၊ တိုက်တာတွေနဲ့ တော်တော်ကို လှတဲ့မြို့ပါ။ ထာပွဲဈေးက နေ့လယ် တစ်နာရီလောက်ကစလို့ စည်တာဆိုတော့ မနက်ပိုင်းကို တခြားသွားစရာ ရှိတာတွေ သွားကြတာပေါ့ဟု ၀တ္ထုတိုဆရာထက်နိုင် (တလုပ်မြို့) က ပြောတော့ အလင်းမောင်တို့ တောင်တွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တက်လိုက်၊ ဆင်းလိုက်နဲ့ လျှောက်ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ ပန်းခြံထာပွဲဈေး မိုးကုတ်ရောက်ပြီးမှ ထာပွဲဈေးကို မရောက်ရင် မပြည့်စုံဘူးလို့ ပြောပြီး ဒေသခံတွေကို ပူဆာထားတဲ့အတိုင်း ဆရာထက်နိုင်ရဲ့ အိမ်ကနေ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ ပန်းခြံထာပွဲဈေးဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးတဲ့နောက် တောင်ဘက်ပေါက်ကနေ ၀င်ခဲ့ကြတယ်။ ကိုထက်နိုင်က ဈေးထဲဝင်မယ့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, May 23rd 2011. Under ၀တ္ထု
တကယ်တော့ ကိုယ်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာတဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းက ထိပ်ဆုံးက ပါနေတယ်။ အဲဒီ အချက်ကို အသေအချာ ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း ဘ၀ကို အေးချမ်းစွာ တစ်ကိုယ်တော် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်လို လူကိုမှ လူပါးပုလင်း ထိတာလား။ အိမ်ထောင် တစ်ခုကို တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ဖို့ ဘယ်လောက် ခက်ခဲတယ် ဆိုတာ အစောကြီးကတည်းက သိနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကိုမှ လက်တွေ့ သင်ခန်းစာတွေ လာပေးတာ ဖြစ်မှာပဲ။ အေးပေါ့လေ မလွှဲမရှောင်သာတဲ့ ကိစ္စဆိုတော့လည်း လက်ခံလိုက် ရတာပေါ့။ ကျွန်တော့် ညီက မွေးထားတာ ဆိုပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့် သားသမီးတွေ ဆိုလည်း မမှားဘူးမို့လား။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် အရွယ်လေးတွေ ရလာတဲ့ ကလေးတွေ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, May 19th 2011. Under သတင်းဆောင်းပါး
သတိဆိုတာ ပိုတာမရှိ၊ လိုတာပဲရှိတယ်တဲ့၊ ဟုတ်တာပေါ့၊ ကျွန်တော်ကလည်း တတ်နိုင်သရွေ့တော့ မမေ့မလျော့ ရှိအောင် ဂရုစိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် နည်းနည်း အသက်အရွယ် ရလာပြီဆိုတော့ အုန်း (ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်) က သိပ်မကောင်းချင်ဘူး။ ပြီးတော့ ကိစ္စများမြောင်တွေကလည်း တယ်လည်း ပေါပါဘိသကိုးနော။ ရှေ့က ကိစ္စကို စဉ်းစားတော့ နောက်က ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စကို မေ့သွားတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဟိုဟာမေ့ ဒီဟာမေ့။ ဒီဟာမေ့ ဟိုဟာမေ့နဲ့ လုံးချာလိုက်နေတယ် ထင်တာပဲ။ အခုပဲကြည့်။ ကိုယ် ထိုင်နေကြ သစ်သားကုလားထိုင်အိုလေး ယိုင်နဲ့နေလို့ ပြင်ခိုင်းရင်း ပလတ်စတစ်ထိုင်ခုံ အစားထိုးထားတာကို အမှတ်တမဲ့ သတိမေ့သွားတယ်။ ဂိတ်ကို ကုန်ပစ္စည်း လာအပ်တဲ့ ကုန်သည်နဲ့ မတ်တတ်ရပ် ... Continue Reading
ဆိုင်ကယ်ဆိုတာ ဒီလိုလား (၂)
ဘီးတော့ ကြိုက်တယ် “ဘူ” ဖြစ်နေလို့ တစ်ခါတလေ ရယ်ရသေးသည်။ ရောင်းသူနှင့် ၀ယ်သူ ပွဲစားပါးနပ်မှုကြောင့် တည့်လုလု ဖြစ်နေရပြီ။ အိုကေ။ ပွဲခ ဘယ်လောက်ရမှာကအစ ပွဲစားက တွက်ပြီးပြီ။ ၀ယ်သူက အစမ်းစီးပြီး ဟိုလမ်းထိပ်က “ဖျော”ခနဲ၊ “စွေ့”ခနဲ ရောက်လာပြီ။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်း၊ နောက်တစ်ခေါက် လှည့်ပတ်ကြည့်… ပြီးမှ… ဆိုင်ကယ်နောက် မီးခွက်အောက်နား အကြည့်ရောက်သွားပြီး “ဟာ”ခနဲ ထအော်သည်။ ပွဲစားလည်း ဗြုန်းဆိုတော့ အလန့်တကြားနဲ့ ဘာများဖြစ်သလဲပေါ့။ အကွဲအပြဲ၊ အနာအဆာ၊ အပွန်းအပဲ့၊ အမှားအယွင်းကြောင့်များလား မဟုတ်ရပါ။ ဆိုင်ကယ်အက္ခရာ နောက်က နံပါတ်တွေကို ပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ “ဘူ” ဖြစ်နေလို့ပါတဲ့။ “ဘူ”ဆိုတာ ပေါင်းခြင်းအားလုံး ၁၀ ပေါ့၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Thursday, May 19th 2011. Under သူတို့အာဘော်
မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်က အခါအားလျော်စွာ ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတိုလေးတွေ ရေးဖြစ်တော့ အချို့က သူတို့ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးကို ဖတ်ကြည့်ပေးဖို့ လာလာပြတာမျိုး မကြာခဏကြုံရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က ရသစာပေတွေရေးနေပေမယ့် သူများရဲ့ရသစာတစ်ပုဒ်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြဖို့တော့ မစွမ်းနိုင်သေးတာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ လာပေးဖတ်ရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ်မြင်တာကို ပြန်ပြောပြတတ်ပါတယ်။ မကြာခင်ကတောင်မှ ညီမတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့ ပြောပါသေးတယ်။ သူ့စာလေးအတွက် မှတ်ချက်ပေးဖို့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ တစ်ခါတည်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့ရသ၀တ္ထုအပေါ်မှာ ထားတဲ့ အမြင်တွေကို စာနဲ့တစ်စုတစ်စည်းတည်း ... Continue Reading